Mid ka mid ah caasimadaha Yurub oo Masjidkii ugu horreeyey yeelanaysa 180 sano ka dib. – Somali Top News
Dowladda Soomaaliya oo war-saxaafadeed ka soo saartay doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo
Cabdirashiid Xidig: Madaxweynaha isbadal doonka Jubbaland ee la doortay
Somalia’s president fires army chiefs, appoints New Mogadishu mayor
Maxkamada sare ee Puntland oo go’aan ka gaartay Ragii kufsiga iyo dilka u geestay Caisha Ilyas
Deg Deg: Cumar Finish oo loo magacaabay Gudoomiyaha cusub ee gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho
Mid ka mid ah caasimadaha Yurub oo Masjidkii ugu horreeyey yeelanaysa 180 sano ka dib.
June 13, 2019 June 13, 2019 Somali Top News	0 Comments
Magaalada Athens ee caasimada wadanka Giriiga ayaa bisha September ee sanadkan waxay si rasmi ah u yeelanaysaa masjidkii ugu horreeyey muddo 180 sano ka dib oo dood iyadoo diidmo xooggan lagaga soo horjeeday in dalkaasi laga dhiso masjid.
Athens waxay aheyd caasimadda kaliya ee Yurub ka tirsan ee aan masjid rasmi ah laheyn, marka laga reebo goobo qarsoodi ah oo sida kuwa ganacsiga oo masjid ahaan Muslimiinta wadankaasi ugu cibaadaysan jireeen.
Kaniisanadda Orthodox-ka ee Giriiga ayaa sanadkii hore ogolaatay dhismaha masjidka, taasi oo ka dambeysay dadaal iyo xusul duub ay sanaddo badan ku jireen Muslimiinta laga tirade badan yahay ee Giriiga.
“Waxaan filaynaa in salaadda ugu horreysa masjidka lagu tukan doono bisha September” ayuu yiri Religion Kostas Gavroglou oo ah wasiirka waxbarashada.
Masjikan ayaa waxaa markiiba ku tukan kara 350 qof, waxaana uu yaal bannaanka faras magaalaha, halkaasi oo ay ku badan yihiin bushada Muslimiinta
Baarlamanka dalka Giriiga ayaa sanadkii 2016 waxay si qabyo ah u ogolaadeen dhismaha masjidka, si goobaha aan munaasabka ku aheyn salaada ee sida qarsoodig ah loogu tukado loo joojiyo.
Shuruudaha waxaa ka mid ah ah in khudbadaha ay ku baxaan luuqada Giriiga, laakiin salaadaha ayaa sida caadiga ah lagu tukan doono Carabiga.
“Waxaan ugu horreyn u mahadcelinaya ALLE, inaan helno ugu dambeyn masjid aan ku tukano, ,oo aan iskugu imaan karno, isla markaana ku wada hadli karno” sidaa waxaa yiri ” Zaki Mohamed, oo noqonaya imaankii ugu horeeyey ee masjidka.
Masaajidyadii ku yeel dalka Giriiga ayaa la burburiyey qaarna waxyaabo kale loo badalay markii wadankaasi uu ku dhawaaqay in uu xoriyadda ka qaatay boqortooyadii Cusmaaniyiinta sanadkii 1821, wallow dhawr masjid laga dhisay xuduudda Giriiga iyo Turkiga.
← Aadan Ducaale oo Soomaaliya ugu baaqay iney ka tanaasusho dacwadda Badda ee Kenya kala dhaxeysa!
Boqortooyada Sacuudiga oo Laba Bilood u qabatay iney Soomaalida kaga baxeen dalkeeda →
Khasaaro ka dhashay Maleeshiyo beeleed isku dagaal deegaano katirsan gobalka Sanaag
Axmad Madoobe oo hubka ka mamnuucay garoonka diyaarada magaalada Kismaayo
May 17, 2019 Somali Top News 0
Waxyaabaha shakiga keeni kara ee ku saabsan heshiiska Kenya iyo Somalia!
March 6, 2019 Somali Top News 0